Shiinaha Nooc dhammeystiran oo ah gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida iyo alaab-qeybiyeyaasha | SAMUEL
Warshadeenu waxay leedahay taariikh ka badan 30 sano, oo leh qalab farsameyn horumarsan, hababka baaritaanka sayniska iyo shaqaale tayo sare leh. Shirkaddu sumcad wanaagsan ayey ku leedahay Guangdong, Xijiang, Jiangsu iyo meelo kale. Waxaan leenahay nidaam adeeg iib ah kadib oo aan bixino adeegyo dhakhso iyo daryeel leh.
Waxaan soo saarnaa noocyo kala duwan oo crankshafts ah oo ka kala yimid Perkins, Renault, Toyota, Volkswagen, Beijing Hyundai, Isuzu, iwm. Shirkaddu waxay sii wadaa inay soo saarto alaabooyin cusub si ay u daboosho baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Ku soo dhowow inaad wax weyddiiso oo aad booqato warshadda si aad uhesho.
Soddon sano oo tikniyoolajiyad wax soo saar crankshaft iyo khibrad, cilmi iyo maarayn adag, damaanad nidaamka tayo kaamil ah iyo tayo tayo sare leh ka dib iibka ayaa aasaas u ah ku guuleysiga kalsoonida macaamiisha.
Shirkaddu waxay si kal iyo laab ah u soo dhaweynaysaa asxaabta cusub iyo kuwii hore iyo macaamiil dal iyo dibadba inay u yimaadaan inay fuliyaan iskaashiyo kala duwan oo xagga dhaqaalaha, farsamada iyo ganacsiga ah.
Maaddadu waxay ka samaysan tahay bir xoog leh oo bir ah oo bir ah oo lagu daaweeyo tiknoolajiyada xoojinta dusha sare si loo hagaajiyo awoodda daalka ee crankshaft.It waxay ku habboon tahay baabuurta, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, koronto-dhaliye set tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaanta sare, jilicsanaanta, dhalaalka iyo adkeysiga ka dib dhammaadka. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
tusaale 3E 5E
xoog silig 700-2 （mPa）
Dheeraynta 2 （%）
Moodooyinka gawaarida lagu dabaqi karo Toyota
Cabirka xirmada 50X16X16
Awood saameyn 230 （J / c ㎡
Yaraynta qaybta 33 （﹪）
Isku xidhka cabirka godka usha 43
Fogaanta dhexe ee usha iskuxirka 43.5 （mm）
Hore: Camshaft-dhamaadka sare
Xiga: Baabuur tayo sare leh Flywheel
Mashiinka Crankshaft ee loo yaqaan 'Perkins135' oo leh ...